Admin, Author at Crown Education
ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးရှိ တက္ကသိုလ်များ၏ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် စတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည့်အချက်များ
Posted on: Dec 22 ,2019
မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းသား၊လူငယ်တွေအတွက် ပြည်ပနိုင်ငံထွက်ပြီး စာဆက်လက် သင်ကြားနိုင်ဖို့ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့(၁ဝ)နှစ်ဝန်းကျင်ထက် ပိုပြီးလွယ်ကူလာခဲ့သလို သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြတဲ့ နိုင်ငံတွေကလည်း စင်္ကာပူ၊ထိုင်း၊ ဂျပန်၊ ယူအက်စ်၊ ယူကေတင်မကတော့ဘဲ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ကိုရီးယား၊နယ်သာလန်၊ဂျာမနီအပြင် အခြားသော နိုင်ငံတွေမှာပါ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေနဲ့တန်းတူ ...
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Public Universityတစ်ခုဖြစ်တဲ့ University of California (UC Berkeley) ဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည့် မဆုလဒ်ဘုန်း
Posted on: Aug 05 ,2019
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းပြီးတော့ ညီမဖေဖေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အရွယ် အသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပြီးမှ နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်စေချင် ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် CROWN Educationမှာ GAC Grade 12 Program ကို တစ်နှစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ...
GAC Grade (12) Program ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီးနောက် Tokyo International University မှ (၅၀)% ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့သူ မဖူးဝေလွင်
ညီမက အစိုးရပညာရေးက လာခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ ပြည်ပသင်ကြားရေး မှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် Academicပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် CROWN Education ရဲ့ American Grade 12 Program (GAC Foundation) ကို အရင်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်အနေနဲ့ဆိုရင် ...
GAC Grade (12) Program ပြီးမြောက်ပြီးနောက် State University of Newyork, Osewgo တွင် (၁)နှစ်စာ ဘာသာရပ်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ (၅၀)% ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့သူ မခိုင်ဆုဝေ
"GAC Grade 12 Programက Train ပေးခဲ့တဲ့ Research Skills တွေ၊ Academic Writing တွေကြောင့် Scholarship Essayကောင်းတစ်ခုကို Create လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး စာသင်နှစ် (၃)နှစ်ဆက်တိုက်(၅ဝ)% ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့သလို ...
“ဆယ်တန်းအပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ဆေးပညာသင်ယူလိုသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့် သိရှိပြင်ဆင်သင့်သည့်အချက်များ”
Posted on: Jun 25 ,2019
နိုင်ငံတကာတွင်ဆေးတက္ကသိုလ်များ ဆေးကျောင်းများတက်ရောက် ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် နိုင်ငံတကာတွင် ဆေးတက္ကသိုလ်များတက်ရောက်တဲ့အခါ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နိုင်မယ့်အခက်အခဲများနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)ပညာရေးထူးချွန်မှု နိုင်ငံတကာတွင် ဆေးပညာကို လေ့လာသင်ယူလိုသူများအနေဖြင့် ဆေးတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန် နိုင်ငံအသီးသီးမှ ထူးချွန်သူများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ...
“MBAနှင့် M.Scရွေးချယ်သင်ယူရာတွင် သိရှိထားသင့်သည့်အချက်များ”
လူငယ်အများစုအနေနဲ့ MBA ဟာ MSc ထက်ပိုကောင်းတယ်လို့ထင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ မမှန်ပါဘူး။ အင်္ဂလန်စနစ် Regulated Qualification Framework (RQF) နဲ့ပြောမယ်ဆို အားလုံးဟာ MA / MSc / MTh / ...
ဒီတစ်ခါမှာတော့ မြန်မာဆယ်တန်း/iGCSEဖြေဆို အောင်မြင်ထားတဲ့ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအတွက် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ကောလိပ်တွေမှာ သင်ယူမှုအများဆုံးဘာသာရပ်ဖြစ်လာတဲ့ STEMဘာသာရပ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ STEMဘာသာရပ်တွေကဘာတွေလဲ? သင်ယူမှုများပြားလာတဲ့STEMဘာသာရပ်တွေက- Science-Technology-Engineering-Mathematicsစတဲ့ဘာသာရပ်တွေကို STEMဘာသာရပ်တွေအဖြစ်အသိများကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်ပညာရေး ရွေးချယ်တက်ရောက်တဲ့အခါ Business and Information Technology, ...
“The Land of Innovation” လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Silicon Valleyမှာ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးများဖြင့် UCတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တွေရယူလိုပါသလား?
Posted on: Jun 07 ,2019
UC Berkeley, UC Irvine, UC Davis စတဲ့ အမေရိကန်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေကို ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် နှစ်စဉ် နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ တက်ရောက်ပြင်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ San Jose City College(SJCC)နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ San Jose ...
“The Land of Innovation” လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Silicon Valleyမှာ ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးများဖြင့် UCတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်တွေရယူလိုပါသလား?
Posted on: May 25 ,2019
လေကြောင်းပညာရပ်တွေကိုလေ့လာရင်း လေယာဉ်ကိုယ်ထည်နှင့် စက်ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းပြုပြင်တပ်ဆင်ရေးကိုပါ သင်ကြားလိုသူများ အတွက် Bachelor of Science in Aviation Maintenance
Posted on: May 22 ,2019
နိုင်ငံတကာမှာ ကမ္ဘာကျော်လေကြောင်းလိုင်းတွေရဲ့ လေယာဉ် ကိုယ်ထည်(သို့မဟုတ်)စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတွေဟာ ရံဖန်ရံခါ ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် နောက်ကွယ်ကပံ့ပိုးကူညီပေးနေသူတွေကတော့ Aviation Maintenance (or ) Aircraft Maintenance ...